Beel Soomaaliyeed oo cabasho ka muujisey qaybsiga jagooyinka DKMG Somalia – SBC
Beel Soomaaliyeed oo cabasho ka muujisey qaybsiga jagooyinka DKMG Somalia
Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa baaq ay soo saartey waxay cabasho kaga muujisay habka qaybsiga hay’adaha dawlada oo ay beeshaasi sheegtey inaan waxba laga siin hadii ay ahaan laheyd wasiir, wasiir kuxigeen, xildhibaan, agaasime ama safiir.
Cabashada beesha oo fariimaha e-mail-ka SBC lagu soo gaarsiiyey ayaa waxaa la sheegay in loo dirayo fariin gaar ah Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Cabdiwali Maxamed Cali, waxaana qoraalkaasi oo uu SBC soo gaarsiiyey Daahir Maxamed Sheekh (Daahir Washington) uu u qornaa sidan.
Anigoo ah Daahir Maxamed Sheikh ( Dahir Washington) isla markaana ah ka mi ah Siyaasiyiinta Beesha Geri Koombe waxan Sallaan qaali ah u direeyna Somali Prime Minster Mudane Cabdi weli Maxamed Cali.
Sallan ka dib waxaansi xushmad iyo qadarin ku jirto kugu soo gudbinayaa Cabashada Beesha Geri Koombe oo ku saabsanTixgelin la,aan in mudo ah lagu hayay beshaan taaso mar walba laga qadiyo Xilaalka Dowladda Soomaaliya sida xilaalka kala ah: Golaha wasiirada, Agaasimaayaasha guud, Ambassadorada iyo Xldhibaanada Baarlamaanka taas oo micnaheeda la garan waayay.
Mudana Prime Minister waxaa si xushmad ku jirto lagaaga codsanaya inaad wax ka qabato Cabashada Beesha geri koombe maxaa yeelay Beshaani waxaay wax weyn ka tabanaysa Dowladihi Hore ee Soomaaliya kuwaaso aan siin tixgalin iyo waxay beesha xaq u leehayd. Waxaan mar labaad ka codsanayna in aad wax ka qabato cabashadena, maxaa yeelay Beesha Geri Kombe waxaa lugu hayo waa Midab takoor xagga Siyaasadda taas oo ka soo horjeeddo Xaquuqda Aadanaha ( Human Rights). Ogow Qofka Caddaalad sameeya Illaah ayaa jecel.
Dahir Mohammed Sheikh (Dahir Washington)
Cell phone: 254 720849886
i hope in lagaa aqbalo
Ali Daksale says:
Waxaan si wanaagsan u soo dhoweynayaa sida wanaagsan ee aad uga gudbiseen Beesha Gerikoombe War saxaafadeed keedii ku wajahnaa Sida wax loo qaybiyey Golaha Wasiirada iyo W/ku xigeenada. Beesha oo Wasiiradii horey ugu jirey Sida Mohamed Rashiid oo la rajeynayey in uu noqdo Wasiirka Maaliyada sida oo horey u soo ahaan jirey.loona balan qaadey in uu ko noqondoono jagadiisii hore. Hada arintaas prime Minister ku uusan fulin Arimo qabiil qanci awoowgood.
Marka Bahda SBC waad mahadsantihiin Markale. Beesha Gerina waxii hada ka danbeeya way idinla soo xiriiri doontaa marka ay rabaan in ay war faafinta la hadlaan.
MN-USA:GCNA(geri-community of North America)Liaison.
A/a salaan kadib
anigoon udhalan beesha cabanaysa hada waa dulmi iyo xaqiraad lagu sameeyay aniguse waxaan aaminsanahay inuusan dhibkaan dhamaanayn waayo waxaa wax lagu qaybsadaa qabiil qabiilna waa wax xun somaliya wax burburiyayna waa ognahay waxuu ahaa qabiil marka pm ka ayay utaalaa suu uqancin lahaa beshaas